एकैसाथ तीन तहको निर्वाचनको बहस : कांग्रेस उत्साहित, एमाले र माओवादीमा आशंका « Bazar Dainik
एकैसाथ तीन तहको निर्वाचनको बहस : कांग्रेस उत्साहित, एमाले र माओवादीमा आशंका
27 January, 2022 9:35 pm
निर्वाचनबारे के भन्छन् झापाका तीन नेता ?
विर्तामोड, माघ १३ । २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थाको कल्पना गरेको छैन । पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा अर्को चुनाव भइसक्नुपर्ने भनिएको छ ।
तर सत्तारुढ गठबन्धनमा कहिले निर्वाचन सार्ने त कहिले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चाहिँ चुनाव नगर्ने षडयन्त्रको रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघि सारेको पाँच महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावको लगभग ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ । अहिले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले वैशाखमा एकैपटक तीन तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
यस विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । स्थानीय तहको चुनाव सार्ने विषय कति सान्दर्भिक ? एकैपटक तीन तहको निर्वाचन सम्भव होला ? यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर बजार दैनिकले झापाका केही नेताहरुसँग संक्षित कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको संक्षित अंशः
‘महामारीबाट जोगाउन एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन’
नेपाली कांग्रेस प्रदेश –१ सभापति
हामी कोभिड महामारीमा छौँ । डब्लुएचओले पनि कोभिडको सातौँ भेरियन्टसम्म आउने चेतावनी दिएको छ । यही बीचमा निर्वाचनलाई लिएर मानिसहरुले आ–आफ्नो दृष्टिकोण राखिरहेका छन् । मेरो विचारमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नु पर्छ । महामारीकै बीच निर्वाचन गरेर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नुहुँदैन ।
जनताले विश्वास गरेर जनप्रतिनिधि चुने तर, जनप्रतिनिधि हुँदा पनि नागरिकले पाएको भनेको भष्ट्राचार मात्र हो । निर्वाचन दुईचार महिना ढिला हुँदा फरक पर्दैन । कर्मचारीले स्थानीय तह चलाउँदै गर्छन् । म आबद्ध पार्टीले निर्वाचनको विषयमा आधिकारिक धारण सार्वजनिक गरेको छैन ।
तर, एकै समयमा निर्वाचन गर्ने हो भने सरकारको खर्च पनि कम हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन पनि कम खर्चमा एकै पटक तीन तहको निर्वाचन गर्नु पर्दछ ।
‘स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बन्न दिनु हुँदैन’
नेकपा एमाले झापा, अध्यक्ष
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेसँगै यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन चर्चाको विषय बनेको छ । विद्यमान कानूनमा जे व्यवस्था छ, त्यसको पालना अपरिहार्य छ । चुनावको मुखमा आएर निर्वाचन पछि धकेल्न खोज्नुले सत्तारुढ दल स्थानीय तहको निर्वाचनबाट डराएको प्रष्ट पार्छ । यो संविधानको मर्म विपरीत हो ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भनेकै स्थानीय सरकारले हो, त्यसैले स्थानीय सरकारको महत्व सबैभन्दा धेरै रहेको छ । तोकिएको अवधिमै निर्वाचन गर्नुपर्छ । अहिले चुनाव नगर्ने हो भने स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बन्छ । संविधानले पनि कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरेको छैन, त्यसैले निर्वाचनको विकल्प छैन ।
अहिलेका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनासाथ नयाँ जनप्रतिनिधि आउने गरी चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । यति धेरै जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेको स्थानीय सरकार कर्मचारीले धान्न सक्ने अवस्था छैन । गठबन्धनको सरकार पनि एमालेको जनमत देखेर निर्वाचनसँग डराइरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्ने डरले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको चुनाव पहिला गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको हो ।
‘तीनै तहको एकैपटक गर्ने निहुँमा निर्वाचन पछि नधकेलियोस्’
माओवादी केन्द्र – १ नं. प्रदेश कमिटी सदस्य
निर्वाचनमा हुने मंहगो खर्च कटौती गर्न पनि तीन तहको निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्छ । तर, तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्दा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह मध्ये कुनै एक निर्वाचनको मितिमा टेकेर गर्नुपर्छ । तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न राजनीतिक दल, संविधान, कानुन र निर्वाचन आयोग तयार हुनुपर्छ ।
तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्ने निहुँमा निर्वाचन पछि धकेलिनु भने हुँदैन । समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । स्थानीय तह जनप्रनिधिविहीन बन्नु हुँदैन । कोभिडको वाहनामा बनाएर पनि निर्वाचनमा ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले चाहेमा प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचन गराउन सक्छ ।
अहिले केहीले विभिन्न वाहना बनाएर निर्वाचन पछि धकेल्न चाहेका छन् । अहिलेका जनप्रतिनिधिले केही अपवाद बाहेक स्थानीय तहमा गुणात्मक विकास गर्न सकेनन् । जति काम भएका छन्, मात्रात्मक छन् । त्यसैले गुणात्मक विकासका लागि पनि नयाँ अनुहार समयमा नै आउन आवश्यक छ ।